डाइबेटिज – Health Post Nepal
के हो डाइबेटिज, किन हुन्छ ?
डाइबेटिज भनेको मानिसको रगतमा चिनीको मात्रा अत्यधिक बढी हुने अवस्था हो । यो दुई प्रकारको हुन्छ : टाइप १ र टाइप २ ।
टाइप १ : यसमा शरीरको प्रतिरोधी प्रणालीमै आक्रमण हुन्छ र शरीरलाई चाहिने इन्सुलिन उत्पादन गर्ने कोषमा क्षति हुन्छ ।
टाइप २ : यसमा शरीरले आवश्यकमात्रामा इन्सुलिन उत्पादन गर्न सक्दैन या शरीरका कोषले इन्सुलिनप्रति प्रतिक्रिया नै जनाउँन सक्दैनन् ।
टाइप टु डाइबेटिज टाइप वानभन्दा धेरै पाइन्छ । बेलायतमा ९० प्रतिशत डाइबेटिजका बिरामी टाइप टुका रोगी हुन्छन् ।
केही गर्भवती महिलामा ब्लड ग्लुकोजको तह उच्च हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरुको शरीरले ग्लुकोज पचाउने इन्सुलिन आवश्यकमात्रामा उत्पादन गर्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्थालाई ‘जेस्टेसनल डाइबेजिट’ भनिन्छ ।
अधिकांश मानिसको ब्लड सुगर सामान्यभन्दा अलि बढी नै हुन्छ तर डाइबेटिज नै भनेर पहिचानचाहि भइसकेको हुँदैंन । यस्तो अवस्थालाई प्रि डाइबेटिज भनिन्छ । त्यसैले ब्लड सुगरकोमात्रा नर्मलभन्दा बढी छ भने पूर्ण रुपमा डाइबेटिज हुने खतरा अत्यधिक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा तत्काल डाक्टरको सल्लाह लिनुपर्छ । तत्काल रोग नियन्त्रण गर्नेतफ नलागे अवस्था खतरापूर्ण हुनसक्नेतर्फ सचेत रहनुपर्छ ।
कस्तो अवस्थामा डाक्टरलाई देखाउने ?
– धेरै तिर्खा लाग्छ भने
– सामान्यभन्दा बढी तारन्तार पिसाब लाग्छ भने (यस्तो अवस्थाचाहिँ रातमा बढी हुन्छ)
– बढी थकान महसुस हुन्छ भने
– तौल घट्दै गएको छ भने
– यौनांग वरिपरि चिलाउन भने
– काटेको ठाउँमा या घाउ निको हुन समय लाग्छ भने
– आँखा धमिलो हुँदै गएको छ भने
टाइप वान डाइबेटिज तत्कालै विकास हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ केही हप्ता लाग्न सक्छ । तर अधिकांश मानिसलाई महसुस नै नभई टाइप टु डाइबेजिट भएको हुन सक्छ । किनभने प्रारम्भिक लक्षण सामान्यत हुन्छ, जसलाई मानिसले मलाई डाइबेटिज भएको हो भन्ने महसुस नै गर्दैन ।
किन हुन्छ डाइबेटिज
हाम्रो शरीरमा चिनीको मात्रा इन्सुलिन नामको हर्मोनले नियन्त्रण गर्छ, जुन प्याङक्रियाज (पेटको पछाडि रहने ग्रन्थी) बाट निस्कन्छ । जब खाना पचेर रक्तप्रवाह प्रणालीमा प्रवेश गर्छ, इन्सुलिनले ग्लुकोजलाई निकालेर कोषतिर पठाउँछ,जहाँ शक्ति उत्पादनका लागि टुक्रने प्रक्रियाहुन्छ । तर डाइबेटिज भएको मानिसमा शरीर ग्लुकोजलाई शक्तिमा परिणत गर्न असमर्थ हुन्छ । यो किनहुन्छ भने, कि त आवश्यकमात्रामा इन्सुलिन उत्पादन भएको छैन या त उत्पादन भएको इन्सुलिनले राम्ररी काम गरेको छैन ।
यदि डाइबेटिज भएको छ भने खानपानमा नियन्त्रण र नियमित शारीरिक अभ्यास नै एकमात्र उपाय हो । यसका साथै नियमित रगत जाँच गरेर ब्लड ग्लुकोजकोमात्रा कति छ हेर्ने गर्नुपर्छ । यस्तै, तौल पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ । टाइप वान डाइबेटिज भएकाहरुले पनि नियमित मात्रामा जीवनभर नै इन्सुलिन इन्जेक्सन लिनुपर्छ । टाइप टु डाइबेटिज बढ्दै गएको छ भने खानपान नियन्त्रण र शारीरिक अभ्यासका अतिरिक्त औषधिको पनि आवश्यकता पर्न सक्छ । डाइबेटिज भएकाहरुलाई डाइबेटिक रेटिनोप्याथी हुन सक्छ, जसलाई समयमै उपचार गरिएन भने दृष्टि गुमाउने खतरा पनि हुन सक्छ ।
Posted in प्रबिधि, मधुमेह, रोगTagged डाइबेटिज, मधुमेहLeaveaComment on के हो डाइबेटिज, किन हुन्छ ?